Ingxelo yezakhelo zegama-Ezona webhusayithi zesifanekiso | Abadali be-Intanethi
Iithemplethi zamagama zeengxelo
UNerea Morcillo | 23/05/2022 17:00 | Izibonelelo, itemplates
Umthombo: IForum yeMobile
Ukwenza ingxelo ukusuka ekuqaleni kunokuba ngumsebenzi ofuna inani eliphezulu lexesha kunye nokuzinikela. Eminye yemibuzo ebalulekileyo kwiingxelo, ngaphandle kokungathandabuzeki, uya kuzama njani ukulungelelanisa lonke ulwazi oluyimfuneko, ukuze yonke into ichazwe kwaye ihlelwe ngokwembalelwano yayo.
Nangona kunjalo, ngokuhamba kwexesha, uluhlu lweetemplates luye lwayilwa kwaye lwenziwa olulawula ukucwangcisa yonke le ngcaciso ngendlela echazwe kwangaphambili, elula kakhulu kwaye kulula. Ngoko, Sibuyile ukuza kuthetha nawe malunga neLizwi kunye neetemplates zalo ezininzi, eziya kukunceda uyila olu hlobo loxwebhu.
Kodwa ukuba awukasazi ukuba sesiphi isixhobo esithetha ngaso, nantsi intshayelelo encinci.
1 Igama: yintoni na kunye nemisebenzi ephambili
2 Uluhlu lweethemplethi zamagama zeengxelo
2.3 Projekthi yeProjekthi
3 Amaphepha eWebhu ezakhelo zeLizwi
3.1 Ithempulethi enikwe amandla
Igama: yintoni na kunye nemisebenzi ephambili
Igama lichazwa njengesoftware okanye enye yeprosesa zamagama eziyinxalenye yeMicrosoft. Yeyona ibalulekileyo kwaye isetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi beWindows. Ukuze uyiqonde ngcono, sisixhobo esikuvumela ukuba wenze amaxwebhu okubhaliweyo, ngale ndlela, singenza uyilo, iingxelo okanye iiprojekthi ezilula kakhulu nezikhawulezayo, ngenxa yezixhobo zayo ezenziwe ngazo.
Isixhobo se-Microsoft Word sele sinamaqonga okanye iinguqulelo ezininzi ezahlukeneyo. Ezi nguqulelo zisusela kusetyenziso lweselula okanye lwethebhulethi, inguqulelo yedesktop kunye nenguqulelo yewebhu leyo Kufanelekile ngokupheleleyo ukusebenza nayo, nokuba usebenzisa i-Android okanye i-IOS.
Ngesi sixhobo sikhulu, uya kuba nokufikelela kwihlabathi elibanzi kakhulu letemplates, eya kwenza lula umsebenzi okanye umsebenzi wohlobo loxwebhu olukhethayo. Kufuneka kwakhona yongezwe ukuba sisixhobo esifuna ilayisenisi, yiyo loo nto ivelisa iindleko zenyanga okanye zonyaka.
NgeLizwi, njengoko siye saphawula ngaphambili, unokwenza amaxwebhu kunye neetekisi ukusuka ekuqaleni. Ngomnye wemisebenzi ebambe ngokungathandabuzekiyo ingqalelo yabasebenzisi kwi-Intanethi, ukusukela oko Sisixhobo esilula kakhulu ukusisebenzisa, ngakumbi ukuba usebenzisa iitemplates, kuba ngokwenyani yonke imizobo engagqibekanga iza kuwe.
Awunayo kuphela ukhetho lokongeza okubhaliweyo kuxwebhu, kodwa kwakhona, Ukwanakho nokufikelela ukuze ukwazi ukufaka yomibini imifanekiso yazo zonke iintlobo kunye neevidiyo okanye amakhonkco aphumayo kumaphepha ewebhu. Kulukhetho oluhle ukuqalisa ukwenza amaxwebhu akho.
Olunye uphawu analo iLizwi kukuba ungagcina kwaye uthumele ngaphandle amaxwebhu kwifomati oyifunayo, oko kukuthi, ukuba ukhetha ukuyigcina kwiPDF ukuyiprinta kamva, ungayenza ngaphandle kwengxaki. Okufanayo kuya kwiPNG okanye kwiJPEG.
KwiLizwi, awunakufikelela kuphela ukwenza amaxwebhu, kodwa unokwenza iitafile zemizobo, ngokusekelwe kwiiprojekthi zakho okanye ulwazi. Ngale ndlela, awuyi kukwazi ukwenza amaxwebhu anomdla kunye noyilo ngokulula, kodwa kwakhona, Uya kuba nako ukufikelela ekubeni ukwazi ukucwangcisa ulwazi njengoko ufuna.
Igama sisixhobo esiya kukumangalisa ukusuka kumzuzu wokuqala ukuya kowokugqibela.
Uluhlu lweethemplethi zamagama zeengxelo
Proposition yitemplate yeLizwi eyilwe ngenjongo yokukwazi ukuyila iingxelo zazo zonke iindidi. Ithempleyithi, enokusetyenziswa zombini kwiMicrosoft Word ukuhlela, kunye nakwiAdobe InDesign kunye namaphepha eApple.
Inesisombululo esiphezulu semifanekiso kunye neetekisi, inkalo eya kwenza kube lula ukubona nokufunda iitemplates. Kananjalo inamaphepha angama-32 ewonke, nto leyo ebonisa ukuba yitemplate ebanzi ngokufanelekileyo kwaye iza nenkcazo kubungakanani bonobumba.
Ngokungafaniyo neSindululo, iKrypton sitemplate esifanelekileyo ukuba sisetyenziswe kwiLizwi nakwi-InDesign. Izalisekisa umsebenzi wesitayela esicocekileyo sencwadana yeshishini, ngoko iza imelwe ngamaphepha alishumi elinesithandathu, itemplate efanelekileyo kunye nefanelekileyo ehambelana ngokugqibeleleyo nohlobo lwefomathi oyifunayo.
itemplate nayo ibandakanya eminye imiyinge ngokomlinganiselo we-A4 kunye neleta yase-US. Ukongeza, ayiphumeli nje ngokusebenza kwayo, kodwa nakwiyilo yayo, kuba inoyilo lwangoku kunye nolwanamhlanje, kunye nokuba yingcali kakhulu kwaye inzulu.
Ithemplethi ongenakuyiphosa kwaye ungayiphosi.
Yenye yeetemplates ethi, ngokugqwesileyo, Ifanele ukuhlelwa njengenye yezona zinto zinomdla kwaye zifanelekile kwimisebenzi yayo. Yitemplate eyilelwe ukuba ihlelwe kuzo zombini iWord kunye ne-Adobe InDesign. Inamaphepha angama-24 ewonke, aya kuba luncedo kakhulu kwiingxelo ezibanzi okanye ezinolwazi oluphangaleleyo.
Ukongeza, enye into ekufuneka uyiqaqambise kukuba sele iyilwe yaye ilungele ukuprintwa. Ngoko ke akuyi kufuneka wenze nawuphi na umbala pre-adjustment kwimifanekiso.
Ngaphandle kwamathandabuzo, inketho entle kakhulu ukuqala ngayo.
MS Word itemplate eyilelwe ukuba isetyenziswe kuphela kwiMicrosoft Word. Inoluhlu lweziyilo ezivelela ngokulula ngokulula kwazo. Inesimo se-invoyisi yorhwebo, ngoko kuya kuba luncedo kakhulu ukuba ingxelo yakho ifumana okufanayo okanye umxholo ofanayo nalowo ukhankanywe.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ngale template uya kuba nokufikelela kuyilo olucocekileyo nolucocekileyo, inkalo enceda kakhulu umlinganiswa oqeqeshelweyo kunye nonzulu ofuna ukunika uyilo lwakho. Ngamafutshane, uyilo olufikelelekayo kweyona projekthi ingumzekelo.
Ezi ibe zezona templates zengxelo ezilungileyo onokuzifumana kwi-intanethi. Kukho nezinye onokuthi uqhube ngazo iiprojekthi ezahlukeneyo, usebenzisa ifomathi efanayo, umzekelo, sifumana incwadi yophawu, ehlala ikwimo yencwadi kwinguqulelo ethe tye, okanye unokuzama iifomati ezinkulu kakhulu.
Nayiphi na kuzo inokukhutshelwa kwaye isimahla ngendlela ekhawulezayo nelula. Okulandelayo, sikubonisa uluhlu olufutshane lwamanye amaphepha angcono apho uya kufumana olu hlobo lweetemplates, kunye nezinye ezihluke kakhulu.
Amaphepha eWebhu ezakhelo zeLizwi
Ithempulethi enikwe amandla
itemplate yamandla, yenye yeewebhusayithi ezilungileyo zokukhuphela iitemplates zamagama. Ikwanakho nokukhuphela iitemplates kwezinye iinkqubo, ngoko ke akuyi kuba yingxaki kuwe xa ukhetha.
Iphepha lewebhu lahlulwe ngokweendidi ezahlukeneyo zeetemplates, apho Kuya kufuneka ukhethe kuphela eyona ilulungeleyo uhlobo lwakho lweprojekthi kwaye uyisebenzise ngqo kwiLizwi.
Abanye bafuna umrhumo kwaye abanye bakhululekile ngokupheleleyo, inzuzo enkulu.
Iphepha lewebhu apho uya kufumana iitemplates ezilungileyo ongazange wazisebenzisa ngaphambili kwiLizwi. Awuyi kuba nokufikelela kwiMicrosoft Word kuphela, kodwa ikwaqulethe iitemplates zazo zombini iPower Point kunye neExcel. Okumangalisayo kukuba, ngaphandle kwamathandabuzo, kuyenza ibe lelinye lawona maphepha ewebhu angcono ukukhuphela iitemplates.
Ukuze ufikelele kwiWPS, Uya kuqala ufune umrhumo omncinci, apho uya kuba nakho ukufikelela ukukhuphela ezinye simahla. Ngaphandle kwamathandabuzo, lukhetho olulungileyo ukuqala ukuguqula uyilo kunye namaxwebhu akho, kwaye ngale ndlela, ukwazi ukufezekisa okanye ukukhetha iziphumo ezintle.
UHerma yiwebhusayithi eyahluke kakhulu kwezi sele sizikhankanye ngaphambili. Inoluhlu lweetemplates, apho sinokukhuphela khona iitemplates zasimahla esele zivela kwisiseko ukwenza iziphumo ezitsha kwiLizwi.
Enye into eye yamangalisa abanye abasebenzisi abasebenzisa eli phepha lewebhu njengendlela yokukhuphela kukuba iitemplates sele ziza nemilinganiselo engagqibekanga, ngoko awuyi kujonga enye enemilinganiselo oyifunayo.
Kulukhetho olulungileyo ukushiya uphawu kumaxwebhu akho eLizwi, ngoko musa ukumyeka emke.
Kwaye ukugqiba olu luhlu luncinci lwamaphepha ewebhu apho unokukhuphela iitemplates zeWord, sifumana le enye ebizwa ngokuba yiFresumes. Liphepha lewebhu elineetemplates ezikhutshelwayo ezingaphezu kwe-120 ezinokusetyenziswa kwiMicrosoft Word.
Kwakhona, into enceda kakhulu kwesi sixhobo kukuba iitemplates zikhululekile ngokupheleleyo, ngoko awuyi kuba nangxaki yokukhuphela iitemplates.
Kwakhona inesifundo esincinci, apho ichaza indlela yokukhuphela nokuzihlela, ngoko ke yindlela efanelekileyo yokukhokela umsebenzisi ngamaxesha onke kwaye ugcine ingqalelo.
I-Microsoft Word ibe sisixhobo esihle sokwenza kunye nokuyila amaxwebhu amakhulu. Kakhulu, kangangokuba kukho amaphepha ewebhu amaninzi okanye izicelo ezinetemplates ezigqwesileyo zokuphucula ukusebenza kwesicelo. Isicelo esisetyenziswe ngabasebenzisi abaninzi be-Intanethi iminyaka, kwaye sisetyenziswa kakhulu.
Awusenaso isizathu sokwenza iprojekthi ngaphezu koxwebhu olulula okanye ingxelo. Ukongeza, amanye amaphepha ewebhu esiwacebisile okanye iitemplates zisimahla, ngoko awuyi kuba nangxaki xa uzikhuphela.
Siyathemba ukuba ibe luncedo olukhulu kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Iithemplethi zamagama zeengxelo